မိတ်ဆွေ သင်..ထိုင်ရာကနေ ထလိုက်တဲ့အခါ မိုက်ခနဲမူးဝေသွားတာမျိုးဖြစ်ဖူးရင် – Shwe Ba
L K T | February 15, 2020 | Health | No Comments
ထိုင် ရာ ကနေ ရုတ်တရက် ထရပ်လိုက်တဲ့ အခါ မိုက်ခနဲ မူးသွားတာမျိုး ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ။ တခါတလေဆို မျက်စိတွေပြာဝေသွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်က ယိုင်ထိုးသွားတာမျိုး အထိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလို ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ၊ ဒီလိုဖြစ်တာဟာ ကိုယ့်အတွက် အန္တရာယ်ရှိလားဆိုတာ သိထားဖို့ ဒီစာလေးကို ဆုံးအောင်ဖတ်ကြည့်ပါ။
မိုက်ခနဲ မူးဝေခြင်းဟာ ….
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ်နည်းနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်။
ကိုယ်စားတဲ့အစားအစာထဲမှာ မတည့်တာတစ်ခုခုပါသွားတာမျိုး၊ ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ဆေးတစ်ခုခုလိမ်းမိ၊ သောက်မိတာမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။
နှလုံးရောဂါ ဒါမှမဟုတ် လေဖြတ်တာရဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာဖြစ်နိုင်တယ်။
ရုတ်တရက် မူးဝေတာဟာ ဒီအချက်တွေထဲက တစ်ချက်တည်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလို၊ အချက်တော်တော်များများကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပြီး အဆိုးဆုံးအခြေအနေအဖြစ် လေဖြတ်တာ အထိဖြစ်နိုင်တာကြောင့် အဲ့ဒီလို မိုက်ခနဲမူးဝေတာမျိုး ခဏခဏဖြစ်နေရင် သေချာပေါက် ဆရာဝန်နဲ့ပြသ စစ်ဆေးကာ ဆေးကုသမှုခံယူသင့်ရင် ယူရပါမယ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းက အကောင်းဆုံး ဆေးဝါးဖြစ်တာကြောင့် အခြေအနေ သိပ်မဆိုးခင်မှာ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးကုသမှုခံယူပါ၊ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက် အတိုင်းလိုက်နာပြီး ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါလို့ အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။
ထိုငျ ရာ ကနေ ရုတျတရကျ ထရပျလိုကျတဲ့ အခါ မိုကျခနဲ မူးသှားတာမြိုး ဖွဈဖူးကွမှာပါ။ တခါတလဆေို မကျြစိတှပွောဝသှေားပွီး ခန်ဓာကိုယျက ယိုငျထိုးသှားတာမြိုး အထိဖွဈတတျပါတယျ။ ဒီလို ဘာလို့ဖွဈတာလဲ၊ ဒီလိုဖွဈတာဟာ ကိုယျ့အတှကျ အန်တရာယျရှိလားဆိုတာ သိထားဖို့ ဒီစာလေးကို ဆုံးအောငျဖတျကွညျ့ပါ။
မိုကျခနဲ မူးဝခွေငျးဟာ ….
ခန်ဓာကိုယျမှာ ရဓောတျနညျးနခွေငျးကွောငျ့ ဖွဈနိုငျတယျ။
ကိုယျစားတဲ့အစားအစာထဲမှာ မတညျ့တာတဈခုခုပါသှားတာမြိုး၊ ကိုယျနဲ့မတညျ့တဲ့ဆေးတဈခုခုလိမျးမိ၊ သောကျမိတာမြိုးကွောငျ့ဖွဈနိုငျတယျ။
နှလုံးရောဂါ ဒါမှမဟုတျ လဖွေတျတာရဲ့ ရှပွေ့ေးလက်ခဏာဖွဈနိုငျတယျ။
ရုတျတရကျ မူးဝတောဟာ ဒီအခကျြတှထေဲက တဈခကျြတညျးကွောငျ့ဖွဈနိုငျသလို၊ အခကျြတျောတျောမြားမြားကွောငျ့လညျးဖွဈနိုငျပွီး အဆိုးဆုံးအခွအေနအေဖွဈ လဖွေတျတာ အထိဖွဈနိုငျတာကွောငျ့ အဲ့ဒီလို မိုကျခနဲမူးဝတောမြိုး ခဏခဏဖွဈနရေငျ သခြောပေါကျ ဆရာဝနျနဲ့ပွသ စဈဆေးကာ ဆေးကုသမှုခံယူသငျ့ရငျ ယူရပါမယျ။ ကွိုတငျကာကှယျခွငျးက အကောငျးဆုံး ဆေးဝါးဖွဈတာကွောငျ့ အခွအေနေ သိပျမဆိုးခငျမှာ ကနျြးမာရေး စဈဆေးကုသမှုခံယူပါ၊ ဆရာဝနျညှနျကွားခကျြ အတိုငျးလိုကျနာပွီး ကိုယျ့ကနျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျပါလို့ အကွံပေးလိုကျပါတယျ။